Izinyathelo zokuphepha zokulondolozwa kwe-spectrometer ye-infrared
Eminyakeni yamuva nje, imboni yokuvikelwa kwemvelo isebenzise izinqubomgomo eziningi ezithandekayo, okungathiwa ziyathandwa. Izinga lokukhula kwemboni liphindwe kaningana lelo le-GDP. Ngasikhathi sinye, ukwanda kwentengo etholakalayo kwesilinganiso sohlu lokuvikelwa kwemvelo okusohlwini ...
Izinga elisha lokunquma kukawoyela emanzini lizoqaliswa
Akumangalisi-ke ukuthi abantu abaningi bathi imishini yokuvikela imvelo icishe ibe yonke indawo, noma ngabe ukukhiqizwa kwezimboni noma impilo yansuku zonke. Lokhu “kungena” buthule kuletha amabhizinisi amaningi nokujaha imali. Ngokwezibalo zomphakathi, isilinganiso sokukhula saminyaka yonke sendawo ...
Imininingwane inquma impumelelo noma ukwehluleka kwabakhiqizi be-infrared spectrum